Nezvedu - Suzhou Jiarui Machinery Co., Ltd.
Suzhou Jiarui Machinery Co., Ltd. seti dhizaini, kusimudzira, kugadzira, kutengesa seimwe yehunyanzvi epurasitiki michina vagadziri. Mumaguta emazuva ano ari kubuda, Triangle, inozivikanwa sekumusha kweChina michina yepurasitiki, zhangjiagang. Nzvimbo yenzvimbo iri pamusoro, zvese mukutengeserana uye kubatira bhizinesi kuri nyore kwazvo.
Mapurasitiki ekudzosera midziyo uye ekuwedzeredza michina kambani yangu ine makore makumi maviri ekugadzira ruzivo, yakaunzwa pamwe nehunyanzvi uye timu yehunyanzvi, ine yakakwana michina michina uye inotsigira zvivakwa, maitiro ekugadzira akakura kwazvo. Parizvino zvigadzirwa zvikuru zvinorema chigayo, crusher yetireyi, bhagidhi bhegi yakakosha kukuya, imwe / mbiri shaft shredding muchina, imwe / mbiri shaft firimu yekutsikisa muchina, hombe pombi yakatsaurwa shredding muchina, PET marara mutsetse, PE / PP firimu marara yekuchenesa tambo , muchina nemidziyo yayo yekubatsira, Plastiki extrusion mutsara nezvimwe zvigadzirwa. Panguva imwecheteyo inogona kupa yakakosha zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi uye zvakaputsika zvekuparadzanisa zvekushandisa zvakare.
Iko kukura kwekambani kwave kunamatira kune mhando yekutanga, sevhisi yekutanga uzivi, inogara ichigadzira yekuvandudza matekinoroji ekugadzira uye maitiro; Kutsvaga kwedu kugona, uye kugara tichiwedzera simba ravo; Isu tinoramba tichivandudza kuvapa vatengi neakawanda akazara uye anoshanda epurasitiki marara echirongwa uye extrusion scheme.
Mukubatana kwanhasi kwepasirese, nyika dzese dzinozove nekuchinjana kwakadzama. SeChinese bhizinesi, isu tinosimudzira iri nani pfungwa ye "yakaitwa muChina" kushandira vatengi vepasirese.
Tichava zvakare vakazvipira kugadzirwa uye marara zvigadzirwa epurasitiki, kuunza zvikuru vakarongeka uye simba-aponese michina, uye kuita chikamu chedu munyika yose kwezvakatipoteredza kuchengetedzwa. Isu tanga tichirwira rutendo rwekuti tinogona kugadzirisa tekinoroji nekukurumidza, kugadzira zvigadzirwa zvakanyanya uye nekudzokorora marara epurasitiki zvakanyanya nharaunda.